Fomba hafa mifangaro hafa | Hanan-dranomasina
Ny ezaky ny fitantanana dia mifantoka amin'ny famokarana (fitantanana ny harena voajanahary) na ny fiarovana (fiarovana ny tontolo iainana). Na izany aza, ny toe-javatra misy ankehitriny - antsoin'ny mpitsikera sasany ref - Mitaky fomba amam-pihetseham-po lava kokoa sy mifanentana amin'ny fitantanana ny vatohara ho an'ny haran-dranomasina izay ahitàna ireo mpandray anjara ao anatin'ny dingana fanapahan-kevitra.
Ity fizarana manaraka ity dia mampiditra fomba maro hafa mifandraika amin'ny fitantanana ankoatra ny RBM izay afaka manampy ireo mpitantana handinika ny fifandraisana eo amin'ny rafitra haran-dranomasina ary mandanjalanja ny filan'ny tetezamita amin'ny fotoana voafetra ho an'ny fiarahamonina miaraka amin'ny fe-potoana maharitra ho an'ny faharetana.
Ny fitrandrahana haran-dranomasina dia manitatra mihoatra ny sisin-taniny mba hampidirana ireo toeram-ponenana mpifanolo-bodirindrina manodidina azy, indrindra ny fandriana ahodin-drano, ala mikitroka, ary ala honko izay manome fiompiana trondro manan-danja. Ireo toeram-ponenana mifandraika ireo dia tsy maintsy raisina sy horaisina ho toy ny ampahany ao amin'ny tarika tokana. Sary © Stephanie Wear / TNC
Ny rafi-pitantanana ara-tontolo iainana (EBM) dia fomba fitantanana an-tsokosoko izay mandinika ny tontolo iainana manontolo, anisan'izany ny olombelona. Ny EBM dia mihevitra ny fiantraikany sy ny fifandraisany amin'ny asan'ny olombelona amin'ny tontolo voajanahary manontolo. Na dia maro aza misokatra amin'ny varavarankely vaovaofamaritana ny EBM, ny tanjony dia azo lazaina tsotra izao: hikojakojana ny tontolo iainana amin'ny toe-pahasalamana mahasalama, mahavokatra ary mandaitra mba hahafahany manome ny tolotra izay tian'ny olona sy ilainy. Ny EBM dia manasongadina ny fiarovana ny rafitry ny tontolo iainana, ny rafitra ary ny dingana lehibe, fa tsy karazana karazana na endri-tsoratra sasantsasany momba ny rafi-pitantanana. Izy io koa dia mifototra amin'ny toerana satria mifantoka amin'ny tontolo voajanahary manokana sy ny karazan-javatra misy fiantraikany amin'izany. Ny EBM dia mampiavaka ny fifandraisana eo amin'ireo rafitra, toy ny eo amin'ny rivotra, ny tany ary ny ranomasina, ary mikendry ny hampiditra ny fomba fijery ekolojika, ara-tsosialy, ara-toekarena ary ara-panjakana, amin'ny fahafantarana ny fiaraha-miombon'izy ireo matanjaka. Ny fitantanana ara-tontolo iainana mifototra amin'ny tontolo iainana dia naorina manodidina ny valo: ref
maharitra - Fanohanana ny tolotra ecosystem amin'ny alalan'ny taranaka ho avy.
tanjona - Tanjona voafetra izay mamaritra ny ho avy sy ny vokatra ho avy.
Ireo modely ekolojika mifehy sy fahatakarana - Ny fikarohana amin'ny sehatra rehetra eo amin'ny fikambanana ara-tontolo iainana dia manome ny fahatakarana ny fifampiraharahana sy fifandraisana eo amin'ny sehatra.
Hery sy fifandraisana - Ny fahasamihafana ara-biolojika sy ny fahasarotan'ny rafitra dia manamafy ny tontolo voajanahary amin'ny fanelingelenana sy ny fanamafisana ny fampandrosoana amin'ny fiovàna maharitra.
Toe-karena eo amin'ny tontolo iainana - Ny fiovana sy ny evolisiona dia miompana amin'ny tontolo voajanahary, ary ny EBM dia mifantoka amin'ny fikirakirana ny rafitr'ity rafitra fa tsy mikendry ny hitazona rafi-panjakana.
Context sy scale - Ny fizotry ny tontolo iainana dia miasa amin'ny alàlan'ny mizana maromaro sy ara-potoana, ka mahatonga ny fitondran-tenan'ny olona henjana be. Ny tetikasa EBM dia mila atao amin'ny toe-javatra voafaritra manokana ao an-toerana.
Olona toy ny fananganana ecosystem - Ny fitantanana ny tontolo iainana dia manaiky ny fiantraikan'ny olombelona amin'ny tontolo voajanahary, ary ny mifamadika amin'izany.
Adaptability and accountability - Mihamitombo ny fahatakarana ny asan'ny ecosystem sy ny fitondrantena, ary matetika ny fanapahan-kevitra dia atao amin'ny fahalalana tsy tanteraka. Ny fitantanana dia tokony ho raisina ho hevi-pisedrana tokony hosedraina sy hohatsaraina amin'ny fomba fianarana tsy tapaka.
Ny fiheverana ny fiheverana bebe kokoa ny olan'ny tontolo iainana sy ny tontolo iainana any amin'ny jono dia nekena. Sary © Ned Deloach / Marine Photobank
Ny Ecosystem Approach to Fisheries Management (EAFM) dia manolotra fomba feno amin'ny fitantanana loharano izay manaiky ny fikojakojana ny asa sy ny serivisy ho tontolo iainana ho tanjona voalohany amin'ny fitantanana ny jono. EAFM dia mizara fitsipika marobe amin'ny fitantanana ny tontolo iainana (EBM), saingy mifantoka manokana amin'ny fitantanana ny fampiasana ny loharanon-karena jono. Ny EAFM dia mampiditra am-pahamendrehana ireo tombony misimisy kokoa momba ny jono azo avy amin'ny tontolo iainana ka miompana amin'ny fitantanana, ao anatin'izany ny fampiasana loharanon-karena an-dranomasina izay matetika mifanipaka. Izy io koa dia mifantoka mafy amin'ny fampidirana ny tsy fahazoana antoka, ny fiovana ary ny fiovana mialoha amin'ny fitantanana ny jono. EAFM dia mitaky fomba fitandremana izay mandrakotra ny rafitra iray manontolo, fa tsy entin'ny tanjona tsotra hanamafisana ny fiotazan'ireo karazana lasibatra. Ny fomba tontolo iainana dia mampitombo be ny fampifanarahana ny tanjon'ny fitantanana eo amin'ny jono sy ny fiarovana ny haran-dranomasina, izay mamela ny fomba fiasa miaraka miaraka amin'ny fifantohana miaraka amin'ny fanamafisana orina ny haran-dranomasina.
Ny tetikasam-pamokarana biodiversity sy ny tanjon'ny vokatra azo avy amin'ny fisarihana dia mety ho tafiditra ao anatin'ny rafitra fanomanana tokana. Sary © Chris Seufert
Ny fisongan'ny EAFM dia manangana fomba maro ho an'ny mpitantana vatohara ho an'ny haran-dranomasina mba hiasa amin'ny mpitantana fisaka amin'ny fiarovana ny tontolo iainana reef. Ny EAFM dia manana ny lazany ary mihamitombo hatrany amin'ny politikan'ny fisarihana nasionaly. Izany no fomba fiasa amin'ny fomba fitantanana ny jono manoloana ny Firenena Mikambana momba ny Sakafo sy ny Fambolena (FAO) an'ny Firenena Mikambana mba hanatanterahana izany. misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFitsipi-pitondrantena ataon'ny FAO ho an'ny jono. Ny FAO dia namaritra ireto fitsipika manaraka ireto ho an'ny EAFM:
Ny fisian'ny fisintonana dia tokony hifehezana ny fiantraikany eo amin'ny tontolo voajanahary araka izay azo atao.
Tokony hifehy ny fifandraisana ara-tontolo iainana eo anelanelan'ny voankazo, ny fiankinan-doha ary ny fiaraha-mikorana.
Ny fepetra fitantanana dia tokony hifanaraka amin'ny fanaparitahana ny loharanom-baovao (manerana ny jurisdictions sy ny drafitr'asa fitantanana).
Tokony hampiharina ny fomba fitandremana, satria tsy ampy ny fahalalana momba ny tontolo iainana.
Fitantanam-pitondrana dia tokony hiantoka ny fahasalaman'ny olombelona sy ny tontolo iainana.
Ny EAFM dia misy dingana efatra fanomanana fototra:
Fanombohana sy sehatra - Ity dingana ity dia manontany ny mpitantana: Inona no hataonao ary inona no tanjona tianao hotratrarina?
Famantarana ny vola, ny olana ary ny laharam-pahamehana - Ity dingana ity dia mitaky ny mpitantana hamantatra ireo olana rehetra ilaina amin'ny fisian'ny fisainana ary hamaritana hoe iza amin'izy ireo no mila fidirana mivantana amin'ny fitantanana mivantana ny jono mba hahatratrarana ny tanjona.
Fampandrosoana ny rafitra EAFM - Ity dingana ity dia miasa mba hamaritana ny teti-pitondran-draharaham-pitantanana tsara indrindra sy ny rafitra ilaina mba hahatratrarana ny tanjona.
Fametrahana rafitra fanaraha-maso, fanaraha-maso, ary famerenana - Ity dingana ity dia mametraka ny rafitra fitantanana vaovao ary manamarika ny fahombiazany.
Ny fampidirana ny filan'ny ecosystems amoron-dranomasina, ny olona sy ny fomba voajanahary dia mety hahatonga ny drafitra MPA Network mahomby. Sary © Stephanie Wear / TNC
Ny vatoharan-dranomasina matetika dia mitranga ao amin'ny faritra amoron-tsiraka sy mifamatotra. Ny asa atao any amin'ny faritra amoron-dranomasina (ohatra, ny fampandrosoana ny tanàna, ny fambolena ary ny fitantanana ny renirano) dia mety hisy fiantraikany goavana amin'ny fahasalamana amin'ny haran-dranomasina.
Ny fitantanana ny zoro amoron-dranomasina (CZM), izay antsoina koa hoe fitantanana iraisam-pirenenan'ny faritra amoron-dranomasina (ICZM), dia fitantanana governemanta izay afaka manampy ireo mpitaingin-tseraseran'ny haran-dranomasina hahazoana antoka ny drafitra fampandrosoana sy ny fitantanana ny faritra amoron-dranomasina hampiditra ny tanjona ara-tontolo iainana sy sosialy mifandraika amin'ny haran-dranomasina. Ny CZM dia manome rafitra ara-dalàna sy andrim-panjakana izay mikendry ny hanohana ny ezaka hanamafisana ny tombontsoa azo avy amin'ny faritra amoron-dranomasina, anisan'izany ny haran-dranomasina, ary ny fampihenana ny fifandonana sy ny fiantraikany ratsy eo amin'ny fiaraha-monina, amin'ny harena, ary amin'ny tontolo iainana.ref Ny singa manan-danja amin'ny fizotry ny CZM dia ny fandraisan'izy ireo anjara mavitrika amin'ny fandraisana andraikitra mavitrika amin'ny fitantanana ny faritra amoron-dranomasina sy ny fanapahan-kevitra momba ny fandrindrana, ary izy ireo dia mpanelanelana amin'ny sehatra iraisam-pirenena.
Matetika ny CZM dia tratra amin'ny alàlan'ny fomba fanaovana drafitra spatial, ary amin'ity lafiny ity dia mety hitovy amin'ny drafitra spatial an-dranomasina (MSP). Ny CZM koa dia mety ahitana faritra amoron-drano (riandrano renirano), ary noho izany dia afaka mihaona aminy na fantson-drano na fanamafisam-peo. Amin'ny ankapobeny, ny ankamaroan'ny CZM dia voafetra ihany amin'ny habaka sy ny tany izay mora fantatra amin'ny hoe 'ny morontsiraka', miaraka amin'ny famaritana ara-pitenenana matetika mifandray amin'ny sisintany ara-panjakana na ara-pitsarana.
Ny paikady ho an'ny CZM amin'ny fiarovana ny haran-dranomasina dia:
Tadiavo ny fitsipika nentim-paharazana na ny fepetra fitantanana ny harena voajanahary ary raha mety hampivelatra ny fitantanana ny harena an-dranomasina ny fampiharana azy.
Ampitao ireo vondrom-piarahamonina ao an-toerana mba handraisany fahalalana efa tranainy sy nentim-paharazana, mba hampandraisana anjara ireo mpandray anjara ao an-toerana amin'ny fandrindrana sy ny fampiharana ny politika, ary hanangana ny fanohanana eo an-toerana ny politikan'ny fitantanana moraly.
Ny tontolon'ny zavaboary amoron-dranomasina, loharano, ary fandaharam-pianarana mba hianatra, hanatsara ny fahasalamana, ary hitantana tsara ny tontolo iainana amoron-dranomasina.
Fantaro ireo tanjona kendrentsika sy maharitra izay miantso ny fampandrosoana amoron-dranomasina mifanaraka amin'ny fiarovana ny tontolo iainana sy mamolavola tetikadin'ny fitantanana ny morontsiraka.
Mamolavola sy mampihatra rafitra ara-dalàna sy ara-dalàna, anisan'izany ny fandrisihana ara-toekarena hanamafy ny fitondran-tena sy ny vokatr'izany.
Manamboara rafi-pitantanana goavana amoron-dranomasina sy fiaraha-miasa eo amin'ny sehatra eo an-toerana, eo amin'ny faritra sy ny firenena.
Manangana sehatra fiarovana maridrefy (MPAs), anisan'izany ny tahiry tsy misy fangarony, hiarovana, hitandroana sy hikolokolo ny karazana sy ny tontolo iaianan'ny lanjany manokana (anisan'izany ny karazana andavanandro).
Manao fanombanana ny fiantraikan'ny tontolo iainana (EIA) amin'ny tetik'asa fampandrosoana rehetra amin'ny fizaran-tany sy rano ao amin'ny faritra amoron-dranomasina.
Mamaritra sy manara-maso ny loto ao anaty solaitrabe ary manamboatra ny fifehezana ny loto.
Ny mpahay siansa, ny masoivohony ary ny fikambanana dia mitombo hatrany amin'ny fampiasana fomba fiasa fandrindrana rafitra mba hamantarana ny toerana sy ny fomba hanomezana ny ezaka amin'ny fitehirizana sy ny fitantanana, indrindra amin'ny sehatra isam-paritra. Sary © Mark Godfrey / TNC
Ny fandrindrana ny habaka an-dranomasina (MSP) dia fomba iray mifandrindra amin'ny famaritana ny toerana misy ny asan'ny olombelona any amin'ny ranomasina mba hampihenana ny fifandonana eo amin'ireo mpiray antoka, hampitombo ny tombony azon'ny olona avy amin'ny ranomasina, ary hanampy amin'ny fitazonana toeram-ponenana an-dranomasina mahasalama. Ny MSP dia nofaritana ho ny "dingan'ny famakafakana sy fizarana ampahany amin'ny habaka an-dranomasina telo-telo amin'ny fampiasana manokana, hahatratrarana tanjona ekolojika, toekarena ary sosialy izay matetika voafaritra amin'ny alàlan'ny fizotry ny politika". Ny vokatra lehibe azo avy amin'ny fizotran'ny MSP ref mazàna dia drafitra na vina feno ho an'ny faritra an-dranomasina, ao anatin'izany ny drafitra fampiharana sy ny fitantanana. Ny MSP dia matetika no fomba fampiasa amin'ny fanatratrarana ny tanjon'ny fitantanana ny tontolo iainana (EBM) sy ny fitantanana ny faritra amoron-tsiraka (CZM).
Maro ireo tombony amin'ny fampiasana MSP ho fitaovana hahazoana ny EBM sy CZM:
Miresaka momba ny tanjona ara-tsosialy, ara-kolontsaina, ara-toekarena ary ara-tontolo iainana miaraka amin'ny fomba fijery rehetra
Mampiditra ireo tanjona an-dranomasina (eo anelanelan'ny politika sy eo amin'ny sehatra fiasa hafa)
Manatsara ny fifantenana ny tranokala ho fampandrosoana na fiarovana; draharaha mafonja kokoa sy mavitrika izay manome tombontsoa maharitra
Manohana ny fitantanana mandrindra ny sehatry ny ecosystems sy ny juridictions politika
Mampihena ny fifanoherana eo amin'ny fampiasana any amin'ny faritra an-dranomasina
Mampihena ny loza mety hitranga amin'ny fiasa an-dranomasina manimba ny tontolo iainana an-dranomasina, anisan'izany ny fiheverana ny fiantraikany kumulative
Dingana 10 natolotry ny UNSECO ho an'ny drafitry ny habakabaka an-dranomasina
Dingana 1: Famaritana ny filàna sy ny fametrahana ny fahefana
Dingana 2: mahazo fanohanana ara-bola
Dingana 3: Fikarakarana ny dingana (alohan'ny famolavolana)
Dingana 4: Fandraisana anjara amin'ny fandraisana anjaran'ny mpandray anjara
Dingana 5: Famaritana sy famakafakana ny fepetra efa misy
Dingana 6: Famaritana sy fandinihana ireo fepetra amin'ny hoavy
Dingana 7: Manangana sy manaiky ny drafitra fitantanana ara-potoana
Dingana 8: Fametrahana sy fampiharana ny drafitra fitantanana ara-potoana
Dingana 9: Fanaraha-maso sy fanombanana ny fahaiza-manao
Dingana 10: Manitsy ny fizotran'ny fitantanana ara-tsiantifika an-dranomasina
Ny fizotry ny MSP dia afaka manampy amin'ny famahana ny olana saro-pady misy ifandraisany amin'ny 'fahazoana misokatra' na 'mahazatra' ampiasaina amin'ny fampiasana fitaovam-piadiana an-dranomasina (sy fisorohana!). Na izany aza, mba hahomby, ny MSP dia mila ampiharina amin'ny fanoloran-tena mafy hikarakarana, ny fandraisana andraikitra ary ny fanaraha-maso. Ny MSP dia tokony ho dingana tsy tapaka, ny dingana manaraka izay misy ny fandraisan'anjaran'ny mpandray anjara izay mitarika ho amin'ny fitantanana ny fitantanana.
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFampidirana UNEP amin'ny EBMmanokatra fisie PDF
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFitsipika sy fampiharana ny fitantanana ny tontolo iainanamanokatra fisie PDF
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFAO EAFM
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoEFFnet Ecosystem Approach to Fitaovana Toolbox
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoCoral Reef Alliance Fampandrosoana ny tany amoron-dranomasina maharitramanokatra fisie PDF
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoMaso
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoNOAA Fandriam-ponenana an-dranomasina sy an-dranomasina
misokatra amin'ny varavarankely vaovao Fandaharan'asan'ny tetik'asa momba ny seranan-tsambo momba ny zana-ponenana
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoOpenChannels: Forum for planning and ocean planning
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFitaovam-pitaterana an-dranomasina
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoDingana iray amin'ny dingana manaraka ny fitantanana ny tontolo iainanamanokatra fisie PDF
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoOseana an'habakabaka iraisam-pirenena, fandrosoana sy fandrobana ny morontsiraka
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFitantanana ara-tsiantifika an-dranomasina eo amin'ny faritry ny Fifanarahana momba ny fahasamihafana eo amin'ny biolojikamanokatra fisie PDF
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoTNC MSP Toolkit